Maxaa ka jira in shaqada laga joojiyay Aamiin Ambulance
Trump oo bilaabay olalihiisa doorashada 2020-ka
Maxaa looga hadlayaa kulanka Baarlamaanka maanta?
Dowladda oo war ka soo saartay doorashada Galmudug
By Xaqiiqa Times / in Wararka Maanta / on Wednesday, 10 Apr 2019 11:35 AM / 0 Comment / 31 views
Taliye kuxigeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Sareeye guute Zakiya Xuseen Axmed ayaa sheegtay inaysan jirin Shaqa joojin lagu sameeyey Gaadiidka gurmadka deg dega ee Aamin Ambulance,isla markaana ay Booliska wadashaqeyn la yeelan doonaan.
“Booliiska Soomaaliyeed wuxuu caddeynayaa in aysan jirin xayiraad la saaray hay’adda gaarka loo leeyahay ee Aamin Ambulance,Hay’adda Booliiska iyo Gobolka Banaadir waxay yeesheen kulan lagu lafa gurayo sidii wada shaqeyn dhaw loo yeelan lahaa, waana sii wadi doonnaa dadaallada lagu mideynaayo hawlaha gurmadka.
Sidoo kale waxaa ay uga mahad celisay Hmas’uuliyiinta Hay’adda Aamin Ambulance iyo cid walba oo gurmadka degdeg ah ka shaqeyso xilkasnimada iyo dadaalka ay muujiyeen,waxaana ay sheegtay inay rajo weyn ka qabaan in si wadajir ah loo wajaho xaaladaha degdeg ah ee yimaada.
Hay’adda gurmadka deg dega ee Aamin Ambulance ayaa ah mid si gaar ah loo leeyahay,waxaana ay ka Shaqeysaa u gurmashada dadka ku waxyeelooba qaraxyada iyo musiibooyinka kale ee ka dhaca Magalada Muqdisho.
Madaxweynaha Maraykanka D. Trump ayaa habeenkii xalay ahaa magaalada Orlando ee gobolka Florida ka bilaabay...
Xildhibaanada Golaha Shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa Maanta oo Arbaco ah taariikhduna...
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ,Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta Xukuumadda Federaalka ayaa War-saxaafadeed...
Maxamed Mursi waxaa uu ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee si dumuquraaddi ah loogu doorto dalka Masar,...
Madaxweynaha Maraykanka D. Trump ayaa habeenkii xalay ahaa magaalada Orlando... Read more →
June 19, 2019 7:57 am
Xildhibaanada Golaha Shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa... Read more →
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ,Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta Xukuumadda Federaalka ayaa War-saxaafadeed... Read more →
Maxamed Mursi waxaa uu ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee si... Read more →
Dad badan oo kamid ah waxgaradka Soomaalida ayaa si weyn... Read more →
Soomaaliya oo ka qayb gashay shir caalami ah oo ka dhacay Equatorial Guinea
June 15, 2019 8:55 am
Wasiirka Maaliyadda Xukuumada Federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle waxa uu... Read more →
Dowladda oo ka hadashay dadkii lagu laayay Gaalkacyo
Dowladda Federalka Soomaaliya ayaa Cambaareesey dadkii Shacabka ahaa ee lagu... Read more →
Askar Ameerikaan ah oo lagu qarxiyay dalka Niger
June 10, 2019 7:45 am
Gaari ay leeyihiin ciidammada Maraykanka ayay miino la qaraxday isaga... Read more →
Qalalaasaha Suudan oo sii soconaya
Ciidanka milateriga wadaan Sudan ayaa gaaska dadka ka ilmeeysiiya u... Read more →
Sarkaal Soomaali ah oo ka tirsanaa Booliiska Maraykanka oo 12 sano lagu xukumay
June 10, 2019 7:34 am
Sarkaal hore uga tirsanaa boliiska magaalada Minneapolis oo lagu magacaabo... Read more →